Fitsipika momba ny fanamafisana fiara
Ny varingarin'ny kodiarana dia matetika misy plastika vita amin'ny frein, kirarony, sisin-dàlana, expander, efitranon'ny rivotra, fonosana fisorohana vovoka ary lohataona. Rehefa miasa izy, ny tsorakazo manosika dia manosika ny wedge ho any expander eo ambanin'ny hetsiky ny efitranon'ny rivotra hanasaraka ny baolina. Ny ampahany amin'ny a ...
Masinina fanaraha-maso vaovao ho an'ny expander wedge wedge
Ahoana ny fomba fiasa? Ny tanjon'ny masinina fanaraha-maso dia ny fanomezana dabilio fitsapana expander wedge, izay ampiasaina hamantarana ho azy ny fiasan'ny expander. Noho izany, ny dingana amin'ny fizahana dia ireto manaraka ireto:
Amin'ny tsenan'ny kamiao maneran-tany sy mavesatra dia maro karazana ny varingarin-tsolika. Ny iray dia ny karazana kapila pnemika, izay malaza any Eropa ary avo lenta tokoa manodidina an'i Sina. Misy ihany koa karazana amponga amponga pneumatic izay ampiasain'ny FAW J7 any Shina. Ankoatra ny karazana amponga camshaft pneumatic dia mo ...